Imaaraadka Carabta oo Maamulka Koofur Galbeed ku wareejisay 10-Gaadiid – STAR FM SOMALIA
Imaaraadka Carabta oo Maamulka Koofur Galbeed ku wareejisay 10-Gaadiid
Safiirka Imaaraadka Carabta u fadhiya Soomaaliya Danjire Maxamed Axmed Al-Cuthman ayaa maanta ku wareejiyay Madaxweynaha Maamulka Koofur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan 10 baabuur oo isugu jira gaadiidka ciidanka, ambalaas, gaari booyad ah iyo hal gaari oo kuwa aan xabadaha karin.
Munaasabad kooban oo ka dhacday xarunta Safaaradda Imaaraadka Carabta ee degmada Shingaani ayaa Madaxweynaha Koofur Galbeed Shariif Xasan waxaa uu ku guddoomay furayaasha baabuurtaas.
Danjire Maxamed Axmed Al-Cuthman ayaa sheegay in gaadiidkan ay ku wareejiyeen Maamulka Koofur Galbeed uu qeyb ka yahay taageerada dowladda Imaaraadka Carabta ay la garab taagan tahay dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya iyo Maamul goboleedyada.
Madaxweynaha Koofur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa uga mahad celiyay Imaaraadka Carabta taageerada, isagoo xusay in gaadiidka lagu wareejiyay uu wax weyn ka tari doono tayeynta iyo dib u dhiska ciidamada Koofur Galbeed.
Imaaraadka Carabta ayaa horay gaadiid ciidan iyo agab milateri ugu deeqday Dowladda Dhexe iyo Maamulka Jubbaland, iyadoo gaadiidkaas ay ku jireen kuwa qafilan ee ay isticmaalaan Ciidamada.
War qoraal ah oo ka soo baxay Xafiiska Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya ayaa waxaa looga hadlay wada xaajoodkii Kismaayo
Madaxweynaha oo kulankii u horeeyay la yeeshay Ergeyga cusub ee Qaramada Midoobey (Daawo Sawirada)